Averina ao amin’ny Akany Ralibera ny fotoam-bavaka isaky ny Alarobia hariva – FJKM Ambavahadimitafo Averina ao amin’ny Akany Ralibera ny fotoam-bavaka isaky ny Alarobia hariva |
Averina ao amin’ny Akany Ralibera ny fotoam-bavaka isaky ny Alarobia hariva
Publié le 27 janvier 2010 à 01:01
Ny fanompoam-pivavahana fanaon’ny Vaomieran’ny Aim-panahy isaky ny Alarobia hariva amin’ny 5h30 dia haverina atao ao amin’ny Akany Ralibera Daniel.
Ny antony moa dia :
– tsy hoe miverin-dàlana hoe efa tato am-piangonana indray vao hiverina ho any fa lafiny ara-teknika mihitsy, noho ny fanomanana ny alahadin’ny sampan-drofia amin’ny 28 marsa 2010 izay hitorian’ny Vaomieran’ny Aim-panahy teny, amin’ny alàlan’ny fomba hafa ato am-piangonana, ary dia hisy fikorontanana kely ny fotoana raha toa ka avy eto am-piangonana no hiakatra any amin’ny Akany hanao famerenana
– ny lafiny iray hafa koa dia; eo ireo kristiana marobe izay nantsoina amin’izany fanompoam-pivavahana izany, tsy FJKM fa indraindray loteriana, katolika, anglikana, sns… mirohoroho saina hoe, toa sintonin’ireto olona ireto ho FJKM izahay, ka mody nadalainy tao amin’ny Akany izahay nandritra ny fotoana elaela ary dia notaritiny ato am-piangonana izao.
Tsy izay no tanjontsika fa ny handraisan’ny olona ilay lakile, dia i Jesoa Kristy. Noho izany dia ao amin’ny Akany indray ny fanompoam-pivavahana izay fanao isakyny Alarobia hariva amin’ny 5 ora sy sasany hanentanana antsika rehetra satria ny fahalalana an’i Jesoa Kristy no tena tovozina ao anatin’izany, tsy ny eto ihany fa ny fiainana mandrakizay ihany koa.